Izindaba - Yiziphi izinto ezingathinta ikhwalithi yokulingiswa kwabakhiqizi bensimbi?
Ikhwalithi yabalingisi inethonya elikhulu ezintweni ezisebenza ngomshini, njengempepho yamaphampu ahlukahlukene, ubukhulu bomgodi wangaphakathi wezingxenye ze-hydraulic, igobolondo elicutshungulwayo, ukunemba komugqa wokubumba nobukhulu bendawo, njll. Izinkinga zizothinta ngqo ukusebenza kahle kwamaphampu nezinhlelo ze-hydraulic, kanye nokwakhiwa kwamandla nokusetshenziswa kwamandla. Lezi zinkinga zisakhulu ngokwengeziwe, njengekhanda lesilinda, i-cylinder block, i-cylinder liner, nokukhipha izinjini zangaphakathi zomlilo. Uma amandla namandla apholile nokushisa okusakazwa njengamaphayiphi omoya kungalungile, kuzothinta ngqo impilo yesevisi yenjini.
Ngaphezu kwalokhu okushiwo ngenhla ngabakhiqizi bensimbi bensimbi, kunezinto eziningi ezingathinta ikhwalithi yabasiki bensimbi.
1. Ukusebenza kwenqubo, inqubo efanelekile yokusebenza yenqubo kumele yenziwe kuqala lapho kusetshenzwa, futhi ngasikhathi sinye, izinga lobuchwepheshe labasebenzi kufanele lithuthukiswe, ukuze inqubo ikwazi ukwenziwa ngendlela efanele.
2. Ngokuya ngobungcweti bokuklama, ubuciko obuhle bokuqamba bungakhiqiza imikhiqizo emihle yokusakaza. Lapho kuklanywa, imboni yokusakaza yensimbi idinga ukunquma usayizi nokuma kokuphonsa ngokuya ngezimo zemvelo kanye nezinto ezibonakalayo zensimbi. Futhi njalo njalo, kufanele futhi sicabangele ubuhlakani bomklamo kusuka ezicini zezinqubo zenqubo yokulingisa ukugwema ukukhubazeka okungadingekile.
3.Ngobungcweti bokusakaza, ifektri yokusakaza yensimbi ingakhetha ukwakheka okufanele nendlela yokwenza okuyisisekelo ngokuya ngesakhiwo, usayizi, isisindo nezimo ezidingekayo zokuphonsa, bese isetha ubambo lokukhipha noma insimbi ebandayo, ithululela uhlelo nokuphonsa system ngokusho kwalezi. Riser njalonjalo.
4. Mayelana nezinto zokusetshenziswa, abakhiqizi kufanele banake ngokukhethekile ikhwalithi yezinto zokusetshenziswa ezisetshenziswayo ekubunjweni. Ikhwalithi yezinto zokusetshenziswa ezisetshenziswayo ekubunjweni kufanele ihlangabezane nezinga, kungenjalo kuzodala ukukhubazeka okufana ne-porosity, pinholes, ukunamathela kwesihlabathi nokufakwa kwe-slag ekusakazweni, okuzothinta ngqo ukusakaza. Ikhwalithi yokubukeka nekhwalithi yangaphakathi yensimbi, uma ingathí sina, izodala ukuthi ukusakazwa kusulwe ngqo.
Ikhwalithi yemikhiqizo ifaka phakathi izinhlobo ezintathu: ikhwalithi yokubukeka, ikhwalithi yangaphakathi nekhwalithi yokusebenzisa:
1. Ikhwalithi yokubukeka: ikakhulukazi ibhekisa ebukhulwini bendawo, ukuphambuka kosayizi, ukuphambuka kokuma, ukukhubazeka kwesendlalelo nokuphambuka kwesisindo, njll, okungabonwa ngqo, konke kuyikhwalithi yokubukeka;
2. Ikhwalithi ye-Intrinsic: Ikakhulu ibhekisa ekwakhekeni kwamakhemikhali, izakhiwo zemishini nezakhiwo zomzimba zokusakaza. Ngokuvamile, ikhwalithi engaphakathi ingabonakala kuphela ngokuthola iphutha. Ukutholwa kwephutha kungathola ukuthi kukhona yini ukufakwa, izimbobo, imifantu, njll ngaphakathi kokusakaza. isici;
3.Sebenzisa ikhwalithi: ikakhulukazi ukuqina kokuphonswa ezindaweni ezahlukahlukene, njengokumelana nokugqoka, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokukhathala, ukusebenza kahle, nokuqina.